देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनका लागि २० बर्ष पुराना गाडी होइन पहिला ८० बर्से अन्डर एसएलसी नेताहरु हटाउन पर्छ
प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७५, सोमबार ०८:५५
नेपाल एक एस्तो देश हो जहाँ अन्डर एसएलसी मान्छे नेता भयेर पिएचडि गरेको कर्मचारीलाइ आफ्नो अन्डरमा राख्छन। हाम्रो देशमा नेता हुन कुनै पढाई चाइदैन र कानुनमा पनि नेता हुन कुनै पढाई तोकियेको छैन। यो हाम्रो कानुनको सबैभन्दा ठुलो कम्जोरी हो। बिस्वमा बिकासित देशहरुमा प्रधानमन्त्री हुन सर्बप्रथम उचित पढाई हुनपर्छ। हरेक बिकासित देशहरुमा हेर्नुस, तेहाका प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा ब्याच्लर पास गरेक नै हुन्छन। कतिपय बिकासित देशहरुमा त मास्टर्स नै पास गरेका हुन्छन। तर हाम्रो देशले बर्सौ देखि एसएलसि पास नगरेका प्रधानमन्त्री पाइरहेका छौ।
येहा बरु ड्राइभर हुन १० कक्षा पास हुनपर्ने नियम बनेको छ तर नेता हुन कुनै पढाई तोकियेको छैन।
सरकारी पाले हुनलाइ ८ कक्षा पास गर्नै पर्छ तर नेता बन्न तेति नि चाइदैन।
किन राज्नीतिक उच्छ पदमा पुग्न शैक्षिक योग्यता नचाइयेको नेपालमा?
येदि रास्ट्र हाक्ने नेताकै शिक्षा छैन भने त्यो देशमा के बिकास होला? जनताले कस्तो बिकासको आशा गर्ने? के क्षमता हुन्छ तेस्तो नेतामा? बास्तबमा मूर्ख त जनता पनि हुन । अलि बुझेर अनि योग्य नेतालाइ ठाँउमा पुराउन कहिलै नि खोज्दैनन। आफ्नो भोटको महत्वो नबुजेपछी येस्तै हो । तेसैले देश बिकास गर्न सबैभन्दा पहिला देशमा यो कानुन बन्न पर्छ कि नेता बन्न पनि शैक्षिक योग्यता हुनपर्छ।
कम्तिमा ब्याच्लर पास भयेको मान्छे मात्र पार्टीमा केन्दृय सदस्य हुन पाउने बाताबरन हरेक राज्नीतिक पार्टीले गर्न पर्छ। देशलाइ सम्बृदी तर्फ धकेल्न सबैभन्दा आबस्यक पुर्बाधार योग्य नेता हो ।
जनयुद्धका बेला माओवादीप्रति निकै आशाबादी थिए, मुकुन्दे । पढाई सकेर क्रान्तिमै होमिने सोच पनि थियो । तर, तीनै माओवादीका कार्यकर्ताबाट मरणाशन्न हुनेगरी कुटाई खानुपर्यो । बैदेशिक रोजगारमा गएका पिडीतलाई उद्धार गर्ने उद्देश्यले बैदेशिक रोजगार अध्ययन केन्द्र भन्ने संस्था चलाउँथे उनी ।
पृथ्वीनारायण शाहको अस्तित्वमाथि प्रश्न गरी इतिहासको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्दै हिँडेपछि केही वर्षअघि मुकुन्देलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । पागल हो कि भनेर पाटन अस्पतालसम्म पनि पुर्यायो ।
‘यो संविधान देखाउनलाई बनाइएको हो । यो नटिकेर फेरि प्रतिगमन फर्किएपछि मुकुन्देले सही भविष्यणली गर्यो भनेर कानमा सुनको कुण्डल लगाइदिनेछन् भन्ने विश्वास भएकाले अहिले नै कान नकाटेको हो ।’ उनले भने- फेरि यी कानले धेरै कुरा सुन्न पनि त बाँकी छ नि !